People – H2H
၉။ အိမ်မက် (သို့မဟုတ်) စိတ်ကူးဖြင့်သာကျေနပ်သူ သင်ရဲ့ လိုအပ်ဆန္ဒများ/ အိမ်မက်များကို အစစ်အမှန်ရရှိဖို့ ကြိုးစားမှုခြေလှမ်းကို မစတင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် သင့်ရဲ့အိမ်မက်ဟာ စိတ်ကူးအဖြစ်သာကျန်ရစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ၈။ လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့အလုပ်ကို မုန်းသူ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မကြာခဏဆိုသလိုတွေ့မြင်နေရတတ်ပါတယ်။ အလုပ်သာလုပ်နေရတယ် ဒီအလုပ်ကိုမနှစ်သက်ဘူးဆိုရင်တော့ သင့်အတွက်လဲအဆင်မပြေသလို အလုပ်တွက်လဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သင် ဆန္ဒမပါတဲ့အလုပ်တစ်ခုကို ဆက်မလုပ်ဘဲ အခြားသင်စိတ်ဝင်စားမဲ့...
ကလေးတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုပြုစု ပျိုးထောင်မလဲ
၁။ လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ ဆုလာဘ် တချို့မိဘတွေဟာ သူတို့ရဲ့ကလေးတွေကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကလေးတွေရဲ့ဘ၀ဟာ အောင်မြင်မှုရလိမ့်ဆိုတာကို ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပိုပြီးအရေးကြီးတာက သူတို့ဘာမဆိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ကလေးတွေကိုယ်တိုင်က ယုံကြည်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေက ဒါဟာသူတို့ရဲ့အနာဂတ် ပုံဖော်ခြင်းပဲ ဆိုတာကိုသိတဲ့ စိတ်ဓာတ် မျိုးရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ၂။ အရာရာတိုင်းဟာ မလွယ်ခင်တော့ ခက်ကြတာချည်းပါပဲ လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်တတ်တဲ့...
ဒါလေးပြောမိတာလေးကို တကယ်ပဲ သှူုစိတ်ဆိုတာကြီးပဲ ဒီလိုနဲ့ ဆေးရုံ တက်ရတဲ့ နေ့ ရောက်သွားသောအခါ ပေးခဲ့တဲ့ ကတိတွေနဲ့ သူသိပ်ကြိုက်တာ ဗျ သူသိရင်သိကောင်းမှာပဲဗျာ ကြေကွဲရတယ်ဆိုတာ ရောဂါပြန်တက်ပြီး သေသွားအောင် အသေများသတ်နေတာလား မသိဘူး
ဗဟုသုတ ပြည့်ဝခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝခြင်း၊ သြဇာတိက္ကမနှင့်ပြည့်စုံခြင်းဆိုတာ ဘဝရဲ့ထူးခြားအားကျလောက်တဲ့အရည်အချင်းတွေပါဘဲ။ဒါပေမယ့် ဒီအချက်တွေဟာ ချမ်းသာခြင်း၊ဆင်းရဲခြင်းက်ိုဆုံးဖြတ်ချက်ပေးတဲ့အခြေခံစည်းမျဉ်းတွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဆင်းရဲခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်းရဲ့ခြားနားချက်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးသွားတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်လုပ်လေ့လုပ်ထရှိတဲ့အလေ့အကျင့်တွေပါဘဲ။အလေ့အကျင့်ဆိုးတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ဘဝကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ လှိုက်စားစေသလို အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘဝကိုတဖြည်းဖြည်းမြင့်တတ်လာစေပါတယ်။ ဘဝမှာကြွယ်ဝချမ်းသာဖို့ ဘယ်လိုအလေ့အကျင့်တွေကိုမွေးမြူရမလဲ? လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ရမလဲ? ကြည့်ရအောင် ဘဝရည်မှန်းချက်တွေကိုဦးစားပေးပါ လူအများစုဟာ သူတို့ ဘဝအနာဂတ်ကိုဦးစားပေးလေ့မရှိပါဘူး။...
သင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကို သင်ကိုယ်တိုင်ဖျက်စီးမိနေတဲ့ အချက်(၇)ချက် ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရေးဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျက်စီးသွားတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကို အပြစ်တင်မိတာ များပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်ယောက်တည်ဆောက်ရတဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးမှာ တစ်ယောက်ရဲ့အပြစ်ကြောင့်သာအရာအားလုံး ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ တခါတလေမှာ ကိုယ်မသိလိုက်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူတွေကြောင့် ဆက်ဆံရေးမှာ အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုအပြုအမူတွေက စုံတွဲဆက်ဆံရေးကို ထိခိုက်လဲဆိုတာကို...
စာလူးမင်း(ကောဇာ ၃၉၇-၄၀၄)၊ မင်းလုလင် ဟူ၍လည်း သမိုင်းတွင် ထင်ရှားသည်။ ငယ်ရွယ်သောမင်း ဟုအဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ ဖခင်ဖြစ်သူ အနော်ရထာ တည်ထောင်ခဲ့သည့် တိုင်းပြည်ကို အရည်အချင်းရှိရှိဖြင့် ဆက်ခံနိုင်သူမဟုတ်ဟု သမိုင်းကပြဆိုသည်။ ဖခင် အနော်ရထာမင်း တည်လက်ဆ ရွှေစည်းခုံစေတီကိုလည်း ပြီးအောင်မတည်ခဲ့ပေ။ ငယ်ရွယ်သူ ဖြစ်သည့်အလျှောက် တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေး တွင်အားနည်းပြီး၊ အပျော်အပါးတွင်...
ပျူစောထီးမင်း ရှေးသရောအခါ ပုဂံပြည်တွင် သမုဒ္ဒရာဇ်မင်း လက်ထက်၌ ငှက်ကြီး ၊ ဝက်ကြီး ၊ ကျားကြီး ၊ ရှူးပျံ တို့သည် ပြည်ရွာကို နှောက်ယှက် မင်းလူလေ၏။ ထိုရန်သူတို့ကို စွမ်းအားသတ္တိနှင့် ပြည့်စုံသော ပျူစောထီးက ဖြိုဖျက်လိုက်လေသည်။ (သမုဒ္ဒရာဇ်မင်းမှာ သာသနာ ၆၇၁ မှ...
မြောက်ကိုရီးယားမှာ အရမ်းချောရင် ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ သမ္မတတို့အား ပျော်တော်ဆက်ရသော မိန်းမလှလေးများအဖွဲ့ (Pleasure Squad) ….။ထိုအဖွဲ့အား ကိုရီးယား ဘာသာလို ဂိပွန်းဂျို ‘Gippeumjo’ ဟုခေါ်သည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းအကြောင်းကို ကမ္ဘာသို့ စတင် အသိပေးပြောကြားသူမှာ ဂျပန်လူမျိုး Kenji Fujimoto( 藤本 健二 ) ဖြစ်သည်။ဂျပန်လူမျိုး Kenji Fujimoto...